Jamboard: Umboniso we4K oHlanganisiweyo odityaniswe neeGoogle Apps | Martech Zone
IJardard: Umboniso we4K oHlanganisiweyo odityaniswe neeGoogle Apps
Lwesine, Disemba 7, 2017 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Ayisoloko isenzeka rhoqo into yokuba ndibhale malunga nezixhobo zekhompyutha, kodwa kunyaka ophelileyo bendihlala kunye Izibane zeDell I-podcast iwavulile ngokwenene amehlo am kwimpembelelo yezixhobo zokusebenza ezinemveliso, ukusebenza kakuhle kunye nezinto ezintsha. Ngelixa sihlala singena siphuma kwisoftware yonke imihla-izixhobo ezikwilifu nakwidesika lethu ziguqula imibutho yethu ngokunjalo.
Ngokukhula kwemisebenzi ekude, ukusebenzisana okukude kuya kuba yimfuneko- kwaye G Suite Uphendula ngo intoarding. I-Jamboard ngumboniso we-4k owenza ukuba amaqela akwazi ukuzoba izimvo zawo, alahle imifanekiso, ongeze amanqaku, kwaye akhuphe izinto ngokuthe ngqo kwiwebhu ngelixa usebenzisana namalungu eqela naphi na. Eyona nto ibaluleke kakhulu, amandla akho akude anokusebenzisa ii-Jamboards ezininzi okanye usetyenziso lwe-Jamboard kwifowuni okanye kwithebhulethi (Android or iOS).
Ijeloard inkonzo ivumela G Suite Abaphathi bokulawula izixhobo zabo ze-Jamboard, kwaye benza ukuba abasebenzisi be-G Suite bakwazi ukunxibelelana nomxholo wejam kubo ifowuni, ipilisi, okanye kwifayile ye- Kwiwebhu. Kwiiveki ezizayo, inkonzo yeJoardard iya kuba yinkonzo ephambili ye-G Suite.
UGoogle ucinge ngenene ngayo yonke into, ukusuka kwikhamera ebanzi ye-engile, iimakrofoni ezininzi, ukuvumela amanqaku ali-16 ngaxeshanye, ukubhala kunye nokuchongwa kwemilo, kwaye kubandakanya nesitayile sokucofa kunye nesisusi esingafuniyo ukubhangqwa.
I-Jamboard iqala nge-USD $ 4,999 (ibandakanya ukuboniswa kwe-1 Jamboard, ii-stylus ezi-2, irabha eli-1, kunye nentaba yodonga olu-1) kunye ne-USD $ 600 yolawulo nonyaka kunye nemali yenkxaso.
Jonga iJamboard Khuphela ii-Jamboard Specs
tags: 4kintsebenziswano yokubonisaG SuiteuphandoiOSintoardusetyenziso lweselulaipilisi
Izinto ezi-6 eziphambili kwiPhulo lokuThengisa ngeSMS eliphumelelayo